ဟော့ပေါ့၊ ဟော့ပေါ့ ဆိုသူတွေအတွက် ‘Shwe Wang’ Hot 1031 views
ဟော့ပေါ့၊ ဟော့ပေါ့ ဆိုသူတွေအတွက် ‘Shwe Wang’ Hot
Pot ဟော့ပေါ့ဆိုင်လေးတွေလမ်းညွှန်ခိုင်းနေတဲ့ဘော်ဒါလေးတွေအတွက် ဒီတစ်ခေါက် ရွှေဝန်းဟော့ပေါ့အကြောင်း လေးရေးပေးမယ်နော်… အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဟော့ပေါ့ကိုဘူဖေးပုံစံမျိုးနဲ့တင်မဟုတ်ပဲ Set လေးတွေနဲ့ပါ မှာစားလို့ရနိုင်တဲ့ဆိုင်လေးတွေတိုးလာပြီ။ တချို့က Set နဲ့ဆိုရင်ဈေးကြီးမယ်၊ အများကြီးကုန်မယ် ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ သိပ်မစားဖြစ်ကြသေးတာတွေလည်းရှိတယ် (ကိုယ်လည်းအရင်ကအဲ့ဒီလိုပဲတွေးခဲ့ဖူးတယ်) တကယ့်တကယ်တော့ဒီလို Set လေးတွေနဲ့ဆိုရင် တစ် Set ကိုအနည်းဆုံးတော့နှစ်ယောက်စားလို့ရတဲ့အတွက် တစ် Set မှာပြီး အခြားကိုယ်လိုချင်တာကိုတစ်ပွဲချင်းမှာ၊ အဲ့လိုတွေလည်းလုပ်လို့ရလာတော့ ထင်သလောက်အများကြီးမကုန်ဖူး။ ဘတ်ဂျက်လည်းချွေတာရာရောက်တယ်ပေါ့။ ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်လည်း Set က (၁၁)မျိုးရှိတယ်။ အောက်မှာပုံလေးထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကအနည်းဆုံး (၈၀၀၀)ကျပ်ကနေအများဆုံး (၁၆၅၀၀)ကျပ်အတွင်းမှာပဲရှိတယ်။ Set တိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအသီးအရွက်အစုံနဲ့ အသားတစ်ပွဲစီပါပြီးသား။ အဲ့ဒါကိုမှနှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်စားမယ်ဆိုလည်း အသားလွှာလေး၊ အသားလုံးလေး ထပ်ထည့်စားလိုက်။ အဲ့ဒီလိုဆိုလည်းဖြစ်တာပဲ… အသီးအရွက်တွေကအကုန်လုံးဈေးနှုန်းတူတယ် တစ်ပွဲကို(၈၀၀)ကျပ်တွေပဲ။ မှိုဆိုရင်လည်း(၁၀၀၀)။ အစုံဆိုရင်တော့(၃၀၀၀)။ လက်လုပ်အသားလုံးလေးတွေက(၁၆၀၀)ကနေ(၃၀၀၀)အတွင်းရှိတယ်။ ကိုယ်တွေစားခဲ့တာ ဝက်သားလုံး၊ ပုဇွန်ချောင်းနဲ့ ကျောက်ပုဇွန်လုံး။ အသားအစစ်လေးတွေနဲ့ပဲလုပ်ထားတာ။ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲတင်တော်တော်ကျိတ်ခဲ့တယ် နောက်ပင်လယ်စာဆိုရင်(၂၀၀၀)ကနေ(၄၀၀၀)အတွင်း၊ အသားက (၃၀၀၀)ကနေ(၁၀၀၀၀)အတွင်းရှိတယ်။ စပါယ်ရှယ်ဟင်းလျာအနေနဲ့လည်းမာလာဘဲသွေးပေါင်း တို့ဘာတို့ရှိတယ်။ ဘဲသွေးကိုမှမာလာအနှစ်နဲ့ပြန်ပေါင်းထားတာ။ တစ်ပွဲကို (၂၀၀၀)ကျပ် ဟင်းရည်မှာ Original, မာလာ၊ ဆားချာ၊ မဆလာဆိုပြီး လေးမျိုးရှိတယ်။ ကိုယ်ကချဉ်စပ်သမားဆိုတော့မာလာ ကြိုက်တယ်။ ဘော်ဒါတွေတော့ဆားချာနဲ့မဆလာဆွဲကြတယ်။ သူ့ဟင်းချိုအရသာတွေက မချို၊ မလေးလေး။ သောက်ရတာပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးရှိတယ်။ ဟင်းရည်နည်းနေတာတွေ့တာနဲ့ဆိုင်ကလူတွေကလာထည့်ပေးတယ် ဒါနဲ့ဟင်းရည်ဖိုးလည်းပေးစရာမလိုဘူး၊ Free Flow ကိုမှအခမဲ့ပါ။ ဆော့စ်… သူ့ရဲ့စပ်ထားတဲ့ဆော့စ်ကိုမှကိုယ်ကငရုတ်သီးလေးတွေနဲ့နံနံပင်လေးတွေထပ်ထည့်ပြီးဆွဲ၊ ပိုကောင်းတယ်။ (ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆိုရင်လည်းမစပ်တတ်တော့လေ ) အသားလွှာလေးတွေကိုအဲ့ဒီဆော့စ် လေးနဲ့တို့စား။ မကျေနပ်သေးရင်ဟော့ပေါ့ထဲလည်းအဲ့ဒီဆော့စ်လေးထပ်ထည့်စား။ ပိုတောင်ကောင်းသွားသေးတယ်။ အသားလွှာဆိုလို့ Aurstalia ကပြန်သွင်းယူထားတဲ့အမဲသား။ ကိုယ်တွေစားတဲ့ဟာ တစ်ပွဲ(၅၀၀၀)တဲ့။ နှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့အေးဆေးဆွဲလို့ရတယ်။ နူးညံ့ပြီး အရသာရှိလှတယ် အအေးဆိုရင်လည်း လေးမျိုးရှိတယ်။ Lemon Tea နဲ့သီးစုံ၊နာနာတ်သီး၊ စပျစ်သီး အဲ့ဒါတွေကိုနှစ်မျိုးစီချပေးလေ့ ရှိတယ်။ သူလည်း Free Flow ပဲ။ ကြိုက်သလောက်ဆွဲ။ ထိုင်ဝမ်ဝက်သားနယ်ထမင်းဆိုလို့စားခဲ့သေးတယ်။ ဝက်သားအနှစ်နဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အီသလိုလေး တော့ရှိပေမယ့်လူကြိုက်များကြတယ်။ ဆိုင်ကမနက်(၁၀)နာရီကနေည(၁၀)နာရီအထိဖွင့်တယ်။ နေ့လည်ထမင်းစားချိန်တွေ၊ ညနေဘက်ရုံးဆင်းချိန် တွေဆိုထိုင်စရာမရှိအောင်လူကြပ်ညပ်နေတာအဲ့နားကဖြတ်သွားတဲ့လူတိုင်းသိမှာပါ… ကိုယ်တွေဆိုနပ်သွားပြီ၊ (၁၁)နာရီလောက်သွားလိုက်တယ်…. သူက Reserve လုပ်လို့မရပါဖူး၊ ဦးရာလူစနစ်နဲ့ပါတဲ့။ Takeaway ရပါတယ်တဲ့။ ထိုင်ဝမ်ဟော့ပေါ့ကိုမှမြန်မာတွေပါးစပ်နဲ့လည်းကိုက်ညီအောင်၊ စားလို့ရအောင်နည်းနည်းပြန်ပြင်ထားပါပြီးတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် အချိုမှုန့်၊ ကြက်သားမှုန့်မသုံးပါဖူး။ ဒါပေမယ့် Customer တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ ဆော့စ်ကောင်တာမှာတော့ ထားပေးထားပါတယ်တဲ့ရှင်…. လိပ်စာက Underground(B-1), No.10, Hledan Center, Kamaryut. ဓါတ်လှေကားကနေဆင်းပြီး ညာဘက်ကိုတည့်တည့်လျှောက်သွားရင် ရွှေဝန်းဆိုတဲ့ဆိုင်လေးရှိပါတယ်။ City Mart ဝင်ပေါက်ဘေးကသွား မယ်ဆိုရင်ညာဘက်အတိုင်းတည့်တည့်သွားရင်တွေ့ရမှာပါ။ 09-966699985 #MyLann #Online_Restaurant_Directory #Online_Food_Guide #Food_Review_in_Yangon #Foodie_Myanmar #Shwe_Wang #Hot_Pot